Ukubuyekezwa kompompi we-Delta Bathroom
Ikhaya / Umhlahlandlela Wompompi / Ukubuyekezwa Kwompompi Wendlu yangasese ye-Delta: Umhlahlandlela Wokuthenga wama-2021 Wompompi Bokugeza be-Delta
2021 / 02 / 03 UkwahlukanisaUmhlahlandlela Wompompi 8387 0
Uma uqala ukubuka ekhaya lakho, ubona isitayela nomqondo jikelele. Noma ngabe uhlose ukubukeka kwesimanje, okwe-rustic, kwendabuko, noma kwesimanje, ikhaya lakho likunikeza i-vibe ethile lapho ungena emnyango.
Uma ubhekisisa, noma kunjalo, yonke imininingwane ihlangana ukwenza isitayela sakho siphile. Oompompi bakho baphakathi kwaleyo mininingwane ebalulekile ekhishini lakho, kanye nasendlini yakho yokugezela.
Njengoba usesha ompompi abaphelele, ikhwalithi yinto ebaluleke kakhulu ngoba akekho ofuna ukufaka ompompi babo njalo eminyakeni embalwa. Umholi oyedwa umi ngaphezu kwabo bonke abanye uma kukhulunywa ngekhwalithi: Delta Faucet.
Izinzuzo zokuthenga ompompi beDelta
IDelta Faucet ihlale ihamba phambili emisha yompompi. Benze ubuchwepheshe obufana neTouch2O, inzwa yokuthinta evula futhi icime ipayipi. Futhi bayizihlakaniphi ezingemuva kweMagnaTite Docking, esebenzisa odonsa ukuvikela ikhanda lepayipi lapho ungasebenzisi i-hose enwetshiwe. Obunye bobuchwepheshe babo bokudala nguH2I-Okinetic Technology, okusha kweshawa okulondolozela amanzi ngenkathi kukwenza kube sengathi uthokozela ishawa esinevolumu ephezulu.
Ngaphezulu kwezici zabo ezihlukile, i-Delta Faucet ihlanganisa ukwakhiwa kwekhwalithi ephezulu kanye newaranti yokuphila elinganiselwe kuyo yonke imikhiqizo yabo. Ungaqiniseka ukuthi uthola umkhiqizo omuhle, futhi uma kwenzeka iphutha elingajwayelekile livela, iDelta ikumbozile.
Njengoba ikhathalogu ebanzi yemikhiqizo yakwaDelta, wazi kanjani ukuthi yimaphi alungele ikhaya lakho? Ake singene ekukhetheni kwethu okuphezulu kwemikhiqizo yeDelta Faucet yekhishi lakho nendawo yokugezela.
Oompompi Abaphezulu Abaphezulu BaseDelta
Indlu yakho yokugezela iyi-oasis lapho ungakhululeka khona wedwa, kepha yonke into esegumbini izothinta imizwa nesitayela osidalayo. Ukukhetha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esifanele kukunikeza ukubukeka okuhle ngenkathi wenza isipiliyoni sibe bushelelezi futhi sibe lula ngangokunokwenzeka. Uma uzingela leyo ompompi ekahle, hlola ukukhetha kwethu okuphezulu kompompi bendawo yokugezela abahle kakhulu.
1. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu segumbi elilodwa
Ukubukeka kwesimanje kumayelana nemigqa ehlanzekile, ebushelelezi, futhi yimuphi umoya ongcono onawo endlini yakho yokugezela kunokuhlanzeka? Ungaba nobunzima bokuthola ompompi abaningi ngokubukeka kwesimanje kakhulu kune Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esisodwa segumbi lokugezela 567LF-PP.
Ukusebenza kwesibambo esisodwa
Isici esiphawuleka kakhulu sale ompompi kungaba ukusebenza kwesibambo esisodwa. Kulula ukuthola ukushisa kwamanzi okudingayo okubalulekile lapho ugeza ubuso bakho ikakhulukazi. Isibambo esisodwa futhi kulula ukusiphatha uma izandla zakho zingcolile noma uzama ukusiza izingane zakho ezincane ukuthi zigeze izandla.
Le ompompi ibuye ilungele ilebula le-Delta's WaterSense ngenxa yokongiwa kwamanzi. Abompompi beWaterSense basebenzisa amanzi acishe abe ngu-20% kunamapompi ajwayelekile.
2. Ipayipi Lombhede Lase-3-Hole Elisakazekile
ILahara iphakathi kompompi abathandwayo bokugezela baseDelta, futhi iza ngezindlela ezahlukahlukene. Ngokuya ngesitayela osifunayo kanye nokumiswa kwethebula lakho noma okuyize, ifayili le- ILahara Isabalale Ipayipi Langasese Le-3-Hole 3538-CZMPU-DST kungaba ukulingana okuphelele.
I-Diamond Seal Technology
Olayini be-InnoFlex PEX
Idizayinelwe ukufakwa okubanzi kwemigodi emithathu
Ukusebenza kwezibambo ezimbili
Umklamo wakudala kaLahara ucashile kunoma iyiphi indawo yokugezela, ulingana cishe noma yisiphi isitayela sokuhlobisa. Ikhwalithi ihlale ibaluleke kakhulu ku-Delta Faucet, noma kunjalo, futhi iLahara ayidumazi.
Le ompompi ifaka uphawu lwedayimane oluyingqayizivele lweDelta nezintambo zabo zokunikezela ze-InnoFlex PEX, konke kuklanyelwe ukuvikela ukuvuza nokusiza umpompi wakho uhlale isikhathi eside. Ngenkathi le modeli icishe iboshelwe ompompi obiza kakhulu kulolu hlu, kungukutshalwa kwemali ongalindela ukukuhlala iminyaka eminingi.
3. Ipompi LaseLahara Centerset Bathroom
Wathandana nesitayela seLahara kepha usuvele ufake isitifiketi sakho sokugezela futhi sinokulungiswa kwemigodi emithathu, hhayi okusabalele. Awuphumanga enhlanhleni, ngoba iDelta ine- Lahara Centerset Igumbi Lombhobho Lokugeza 2538-CZMPU-DST kakhulu.
Le modeli ye-centeret inaso sonke isitayela se-Lahara nezici ozaziyo nozithandayo kodwa ngokumisa okulingana nokufakwa okungama-intshi amane. IDelta yenza ukufakwa kungabi namthungo ngangokunokwenzeka ngokufaka umhlangano we-pop-up drain kanye nolayini abahlanganisiwe bokunikezela ngompompi.
Ngenkathi iDelta's Diamond Seal Technology ingehlukile kule mpompi ethile, kuyisici okufanele sikhulume ngaso. I-valve yokunemba ihlala cishe kabili uma nje ama-valve ajwayelekile kwamanye ompompi, ungalindela ukuthi ukuthenga kwakho kuhlale isikhathi eside.
4. IHaywood Centerset Bathroom
Onke ompompi abasohlwini lwethu kuze kube manje bebesendaweni ethile ebangeni lesimanje noma lesimanje. Uma ukhetha ukubukeka kwendabuko, i IHaywood Centerset Igumbi Lombhobho Lokugeza I-Chrome 25999LF izolunga i-alley yakho.
Izinketho ezintathu zokuqeda
IHaywood ihlukile ngezindlela eziningi uma iqhathaniswa namanye ompompi bokugezela baseDelta ohlwini lwethu. Okokuqala, kuyindlela yokonga kakhulu cishe ku-25% wentengo yamamodeli weLahara esezingeni eliphakeme.
Ngaphezu komaki wentengo okhangayo, iHaywood iyona emfushane kunabo bonke ompompi abasohlwini lwethu. Ispout sayo siphezulu ngamasentimitha angu-4.68 kanti amanye amamodeli acishe abe amasentimitha ayisikhombisa ubude.
Isitayela siyisizathu esiphezulu sabaninikhaya abaningi abakhetha iHaywood, noma kunjalo. Inokubukeka kwendabuko okubandakanya ama-bulb namajika agelezayo, okwenza kube kuhle endlini yokugezela enomuzwa womndeni ofudumele noma ukubukeka kwe-Old Hollywood.
5.Lahara Single Hole Igumbi lokugezela ompompi
Kumakamelo okugeza ezindaweni ezincane noma amakamelo we-powder, ukufakwa komgodi owodwa kuvamile. Uma ngabe ubucabanga ukuthi kuthathe uLahara odumile ngokungacabangi ngendlu yakho yokugezela, cabanga futhi bese ubheka i- Lahara Single Hole Indlu yangasese ompompi 538-CZMPU-DST.
Ilingana ukufakwa komgodi owodwa noma izimbobo ezintathu
Njengoba ungalindela, le modeli inguqulo yomgodi owodwa yamanye amamodeli kaLahara. Ngokusebenziseka kwemisebenzi ehlukahlukene, kufaka phakathi ipuleti lokuzikhethela ukuze ulisebenzise uma unokufakwa okungama-intshi ama-intshi amathathu.
Kunezici ezimbalwa ezihlukile okufanele uzicabangele nakule mpompi. Okokuqala, mude kunezinye izinhlobo zeLahara cishe ezingamasentimitha ayisikhombisa ubude. Qinisekisa ukukala isikhala sakho futhi uqiniseke ukuthi umbhobho uzolingana.
Le modeli kaLahara inenketho yokwengeza iTouch2O ubuchwepheshe: Ukuqamba kweDelta okukuvumela ukuthi uvule futhi ucime ompompi ngokuthinta ingalo yakho noma indololwane. Kukulungele ukugeza izandla ezingcolile ngaphandle kokusakaza lokho kumbhobho uqobo.
Izisekelo isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Isibambo esisodwa
Akuwona wonke umuntu ofuna ukuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sibe yingxenye ebalulekile yokubukeka kwendlu yangasese. Uma umane ufuna umpompi osisekelo, osebenzayo, wekhwalithi ephezulu, ungumuntu ofanelekela ukhetho lwe- Izisekelo isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Isibambo esisodwa.
Ithegi yentengo engabizi
Izinketho ezimbili zokuqeda
Umpompi weFoundations kungenzeka ungabi nawo ama-frills, kepha awudingi. Isitayela esilula sepompo nokuklanywa okuhlangene kuyenza iphelele kunoma iyiphi indawo yokugezela, futhi intengo yayo engabizi kakhulu iyinzuzo nayo.
Ukuze kube lula kuwe, isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu siza nensalela ye-pop-up efakiwe. Idizayinelwe ukulingana ukufaka izimbobo ezintathu, ukufakwa kwamayintshi amane futhi iyatholakala kuzo zombili i-chrome nengagqwali ukugcwalisa ukubukeka kwendlu yakho yokugezela.
Ukukhetha i-Delta Bathroom Faucet yakho
Awukwazi ukungahambi kahle ngepayipi lokugezela laseDelta. Kungakhathaliseki ukuthi i-countertop yakho inomgodi owodwa, izimbobo ezintathu ezihlanganisiwe, noma ukumiswa kwemigodi emithathu, kunezinketho zokuhambisana nezidingo zakho nesitayela sakho.
Tagizitsha zokugeza	Edlule :: Ungazihlanza Kanjani ompompi Abasekhishini Abamnyama Olandelayo: Ukubuyekezwa Kwetheyiphu Yekhishi LaseDelta: Umhlahlandlela Wokuthenga Ka-2021 Wompompi Bekhishi BaseDelta
2021 / 01 / 27 6283